Kugadzirisa Keyword Density Usingazivi Kubva Semalt, Natalia Khachaturyan
Zvinyorwa zvinokonzera kuvhiringidzika kune vashandi vebhizinesi ndicho chikonzero nei vamwe vavo vangave vasina chokwadi nekutanga SEO. Parizvino, pane kuwedzera kwemakambani anotaura kuti anopa maitiro anogona kuwana webhusaiti kusvika kumusoro kweGoogle zvigumisiro. Mibvunzo yakadai semumwe wavo ari kureva nhema uye kuti ndiani asiri, kana kuti kuisa mari mune SEO ndiko kusarudzo kwakanaka kunofanira kusimuka. Panyaya iyi, Content Content Stratist Semalt , Natalia Khachaturyan, inopa sarudzo iri nyore kune dambudziko rakasimbiswa:
Vanhu vazhinji vanowanzosanzwisisa kushandiswa kwemashoko eSeO
Muna 2009, Matt Cutts akatsanangura kuti Google yakanga isisashandisi mazwi echigamba sechikamu chetsvakurudzo yavo yekutsvaga. Pasinei nenyevero iyi, vanhu vakaramba vachiita izvi zvisina kururama kuti mazwi ekukosha anokosha kune SEO yavo - fidelity services company. Vanoramba vachishandisa shoko rekita meta tag pasinei nekuti Google.com haina kuvanetsa zvachose.
Apo SEO yakanga ichiri muchechecheche wayo, pakati pezvinetso yekutsvaga injini s yakaedza kurarama nayo yakanga iri chinhu chikuru. Pakutanga, injini yekutsvaga inongogona kuisa pfungwa pane peji-peji zvisati zvave yakanyatsogadzirisa zvakakwana kuti ibvise-peji zvinhu zvakadai sekushandiswa kwe backlinks . Nheyo dzaiva pakati pe-on-page zvinhu izvo vashandisi vewebhu vaizoisa mumushure we webhusaiti vachishandisa keyword meta tag.
Nzira yacho yakakurumidza kushandiswa zvisina kunaka nechiitiko chinonzi 'keyword stuffing.' Keyword stuffing ndechimwe chezvinhu zvakawanda zve SEO zvakashandiswa se Black Hat tactics. Vanhu vazhinji vakawana mhepo yekuti vaizokwanisa sei kuisa zvinhu zvakawanda zvemashoko (mamwe acho akanga asingabatsiri) mumutambo kushandisa mashoko kuonekwa. Vashandi vakanga vasingakwanisi kuona mazwi aya, asi zvakatungamirira pakuendeswa kwezvinhu zvinotsausa uye zvisina kururama.
Gwara reGoogle nderekuregeredza meta tag panguva yekutsvaga webhu zvachose uye yakaramba ichijekesa izvi. Sezvo vanhu vachifunga nezveiyo seyiyo, chokwadi chechinhu chacho ndechekuti Google haisashandisi mazwi mazita mateta meta mukati mawo web search..
Kana Google isingachengeti meta tag, zvinoreva here kuti keyword stuffing haizokuvadzi webhusaiti?
Kusiyana nekutenda kwakakurumbira, chinhu chikuru chinokanganisa chinokuvadza webhusaiti. Kuwanda kwemashoko makuru ekugovera hakuna kupa SEO kukosha, kunowedzera mikana yekusatomborenda zvachose. Google yakawana nzira yekutsvaga mamwe mazwi ezvinyorwa zvekugadzirisa.
Cutts yakasimbisa kuti kusunungurwa kwePenguin algorithm muna 2012, zvechokwadi, kunoderedza kuenzanisa kwemasayiti akafunga kuti aiputsa mazano eGoogle aripo. Imwe yemitemo yeGoogle iyo yakagara iine nzvimbo ndeyekudzivirira kwe keyword stuffing. Inoti 'Usaisa mapeji nemashoko asina musoro.'
Inoratidza kuti pasinei neGoogle usingashandisi keyword tag yeZOO zvinangwa, ihwo hugadziridzo huri kutsvaga nyaya dzekugadzirisa nekunyengedza.
Mamwe mavara emuchena mutsvuku anosanganisira:
Nyaya dzisingaonekwi. Vakawanda vanotsvaga zvinyorwa zvinyorwa mumashoko acho vachifananidza mavara avo nejiji peji. Pfungwa iri shure iyi ndeyekuvanza aya mazwi echigarire kubva kumeso evanhu asi kwete kubva kuzvinjini. Kubudikidza neizvi, spammers vanotarisira kuwedzera kukosha kwavo pane tsvakurudzo yekutsvaga pasina kuchinja kuonekwa kwewebsite.
Mifananidzo yakavanzika uye zvinyorwa. Mamwe akavanza mifananidzo shure kwezvifananidzo kana kushandisa Nyaya yeChincading Style sechimwe chinhu kune keyword stuffing. Vanoshandisa mathesi anoita kuti zvive nyore kuzvivanza mumusikana wacho asi achizvichengetedza zvinonzwisiswa kune injini dzinotsvaga
Keyword stuffing kunze kwe keyword meta tag. Kunyange kana iwe ukashandisa-mazwi echimwe mune mamwe mavara pawebsite, zvinogona kuva nemigumisiro yakaipa panzvimbo iyi panzvimbo yekuvandudza mararamiro ayo. Nguva dzose ramba uchienzanisa pakati pekunyorera munhu uye injini yekutsvaga kuve nechokwadi chokuti zvese zvinowanikwa zvinowanzoitika.
Kubatanidza kugadzirisa. Rinotarisa kana munhu anoshandisa zvinyorwa uye meta tsanangudzo pawebsite. Google haina kuona izvi sekudzokorora zvinyorwa saka zvichifunga kuti zvakakosha. Pane kudaro, rinoritora seiri zvinyorwa zvinyorwa uye saka rinoisvibisa kubva mugumisiro yekutsvaga.
Tinoenda kupi kuno?
Nzira yakarurama yeSeO inowanzotarisana. Zvisinei, zvose zvinosvika pakuisa pfungwa pazvinyorwa zvakapiwa uye zvakanakira. Vanhu vanofanira kuchinja nzira yavanosangana nayo SEO uye kushanduka kubva kushandisa mazwi ekutsvaga mazwi.